“In canug yar qoorta loo suro masiirka Waddan dhan waa arrin xad dhaaf ah” – Jose Mourinho oo ka hadlay rigooradii laga qabtay Bukayo Saka – Gool FM
“In canug yar qoorta loo suro masiirka Waddan dhan waa arrin xad dhaaf ah” – Jose Mourinho oo ka hadlay rigooradii laga qabtay Bukayo Saka
(London) 13 Luulyo 2021. Tababaraha reer Portugal eehaatan layliya kooxda Roma ee Waddanka Talyaaniga ee Jose Mourinho ayaa wax la la yaabo ku tilmaamay in masiirka Waddan dhan loo dhiibo cunug yar sida uu hadalka u dhigay.
Macallinkan hadallada kulul ee Jose Mourinho oo la hadlayey Shabakadda Talk Sport, waxa uu ka hadlay siyaasad xumada tababaraha Ingiriiska ee Gareth Southgate iyo sidii xumayd ee uu u soo xushay raggii u tuurayey rigoorooyinka.
“Waxaan la yaabanahay sababta Sterling iyo Luke Shaw ay u tuuri waayeen gool ku laadyada oo taa beddelkeeda loogu dhiibay saddex ciyaartooy oo da’yar ah Sancho, Bukayo Saka, Marcus Rashford, iyadoo saddexduna ay dhallin waayeen kubbadihii ay rideen” ayuu yiri Jose Mourinho.
Tababaraha Kooxda Roma ayaa hadalkiisa intaa sii raaciyay: “Marka la eego Saka, in canug yar qoorta loo suro masiirka Waddan dhan waa arrin xad dhaaf ah”.
Dhinaca kale Tababaraha Xulka qaranka Talyaaniga ee Roberto Mancini oo loo yaqaanno Macallinka Aamusan ayaa isagoo dhegta ku dheggan Koobka Euro 2020 ka dajiyey Magaalada Rome, waxaana macallinka oo isagoo ciyaartooy ahna xulka Italy u soo ciyaaray, haddana koobka qarammadda Yurub kula guuleystay isagoo tababare ah Wargeysyada Talyaanigu ay hadal hayaan inuu Kooxo waa weyn ka heli doono dalabyo sare.
LAYAAB: Taageere Ingiriis ah oo 7 sano ka hor saadaaliyey natiijada ciyaartii Final-ka ee EURO 2020.. (Sixiroole miyaa?)